Southampton, Western Australia, Australia
Indlu etofotofo, engasese, ezimeleyo kwithambeka elijonge kwintlambo yeBalingup Brook. Ukuzola, kufanelekile, zonke izinto eziyimfuneko zinikezelwe. Iimbono ezintle zentlambo, inkungu yasebusika, umlilo weenkuni ngexesha lonyaka. Iidolophu ezininzi ezijikelezileyo. Iinduli eziqengqelekayo, iifama kunye namahlathi, iidolophu zembali, ukutya okuhle kwengingqi kunye newayini.
Pet-friendly kunye nemithetho esisiseko: akukho zinja kwifenitshala; akukho zinja kumagumbi okulala; akukho zinja ezishiywe zodwa kwi-Cottage; bangayixhaphazi imfuyo. Akukho njana (ngaphantsi kweenyanga ezili-12), uxolo!
I-Cottage yethu isentabeni, ijonge ngaphaya kwentlambo ye-Balingup Brook. Yindawo yokuhlala esemgangathweni ye-chalet, kunye nazo zonke izinto ezibalulekileyo.
Kukho amagumbi amabini okulala, ukumkanikazi kunye newele, kunye ne-futon esongwayo kwigumbi lokuhlala. Igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese zahlukene, kwaye kukho indawo yokuhlamba impahla. Ikhitshi eligcweleyo, indawo yokutyela kunye negumbi lokuhlala zonke zijonge iveranda ejonge emantla kunye nembono yentlambo engaphaya.
I-Reverse-cycle air conditioning yongezwa ngeefeni zesilingi ehlotyeni kunye nomlilo weenkuni ebusika.
Kukho umabonakude osemgangathweni kwaye sibonelela ngesidlali seDVD. Zisa eyakho okanye urente kwiBalingup General Store. Ukufikelela kwifowuni ephathwayo kulungile (i-Telstra ilungile, i-Optus kunye ne-Vodafone marginal). Tho, sincoma ukuba ujabulele ukuthula, ingoma yeentaka, umdlalo wokukhanya kwelanga kwimithi kunye namasimi.
Usebenzisa ngokupheleleyo kunye ne-cottage ngexesha lokuhlala kwakho.
Indawo yokungena yabucala, isitalato esahlukileyo okanye indawo yokungena kwisakhiwo,
Iphedi yezitshixo, Zijonge ekhaya ngekhowudi yomnyango.